OGIGE NKEWAPỤ ỌRỊA KORO N’ENUGWU:KEDU NKE BỤ EZIOKWU? – hoo!haa!!
OGIGE NKEWAPỤ ỌRỊA KORO N’ENUGWU:KEDU NKE BỤ EZIOKWU?
– E Sila Ụlọ Ọgwụ Colliery bụga Ogige ahụ n’ụlọ Ọgwụ ESUTH, Parklane.
Enugwu – Gọọmenti Enugwu Steeti esila n’ụlọ ọgwụ Colliery buga Ogige Nkewapụ Ọrịa Koro n’ụlọ ọgwụ ESUTH /Parklane Enugwu.
Kọmishọna Steeti ahụ na-ahụ maka Ahụike, Dọkịnta Agụjiobi kwupụtara nke a n’ozi o wepụtara ndị nta akụkọ ụnyaahụ.
Dọkinta Agụjobi kọwara na nke maka ihu akarangwa nnyocha ahụike ọgbara ọhụrụ ndị dị adị n’ụlọ ọgwụ ESUTH.
Kaosiladi, nkea mere ka ndị mmadụ malite ịjụ ajụjụ banyere akarangwa nile Gọọmenti steeti ahụ sịrị na e butere n’ụlọ ọgwụ Colliery, Enugwu ka o nwee ike ịrụ ọrụ etu kwesịrị ekwesị dịka Ogige nkewapụ Ọrịa Koro.
Ndị Uwe Ojii nọbu weghara ụlọ ọgwụ Colliery, Enugwu ebe ogige nkewapụ ọrịa koro dịbu, nke na enweghịkwa ike ma ọ bụ ịpụ n’ebe ahụ, tinyekwara ndị ọrụ na-arụ ebe ahụ.
Nkea ga-abụ maka nwanyị ahụ dị iri afọ asaa, a na-enyo enyo ma o bu ọrịa koro, onye nke nwụrụ ebe ahụ ka ọ gachara otu ụbọchị ihe nchọpụta nnyocha ahụ maka ọrịa koro e mere ya gosiri na o bughi ọrịa ahụ.
Ada ya nwanyị nọrọ n’ọba ozi mmekọrịta dị iche iche were kpaa ákwá arịrị ma kpọkukwaa Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi Enugwu Steeti ka o leruo anya n’ajọ ọnọdụ ya bụ ogige nkewapụ ọrịa kọrọ nke ọ sịrị butere ọnwụ nne ya ọma.
N’ozi ahụ o zisaara n’ọba ozi mmekọrịta, o ogige ahụ adịghị mma ihe mmadụ dị ndụ kwesịrị ịnọ, na nne ya nọ ebe ahụ e were na-asụ ọhịa tojuru ebe ahụ.
Ọzọkwa bụ na akarangwa ndị kwesịrị ekwesị adịghị ebe ahụ tinyere na ndị ọrụ ahụike nọ ebe ahụ na-asọ nne ya asọ.
N’aka nke ọzọ, Gọọmenti Enugwu Steeti na-ekwu na okwu nwa nwanyị ahụ bụ asị, na ogige ahụ na-arụ ọrụ etu o kwesịrị.
Ọ bụ na nwa Mgbeke amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ?
Ọ pụtara na Kọmishọna na-ahụ maka Ahụike na Steeti ahụ amaghị ọrụ ya ka o nwere ihe ọzọ ọ na-ekpuchi?
Ọzọkwa, Nde Naira Narị iri atọ n’abụọ Dọkịnta Agụjobi si na Gọọmenti Enugwu Steeti mapụtara ụnyahụ maka ọrịa kọrọ, ọ dị giche na nde Naira iri abụọ a mapụtaburu a ogige nkewapụ ọrịa kọrọ dịbu n’ụlọ ọgwụ Colliery?
Nke ọzọ, ọ bụrụ na Gọọmenti Enugwu Steeti rụtọpụrụ ogige nnyocha ahụike ọgbara ọhụrụ dị na ncherita ihu Ebeanọ Tunnel, agaghị esi Enugwu gbara gawa Irrua, Edo Steeti maka ime nnyocha ọrịa koro.
Nke ka nke bụ na Gọọmenti Enugwu Steeti agaghị ịna emefu udiri akatamkpo ego ọ na-emefu ugbua maka akarangwa nnyocha ahụike ọrịa koro
Previous Post: HMM, NWOKE KPỌDORO ISI N’ALA SITE N’AFỌ NNE YA ABỤRỤLA OKE MMADỤ
Next Post: NWA AGBỌGHỌ CHỌPỤTARA NA ENYI YA NWOKE BỤ NWOKE JI NWANYỊ, CHỊ ỤMỤ AṄỤOLA NSI